Denim laser ịsa osise - Golden Laser
Denim laser ịsa osise
Denim Laser Engsa osise Ngwọta
Jeans / T-uwe elu / Uwe / Jacket / Corduroy
Gịnị nwere ike laser saa osise eme?
Denim Ntughari aha ndi mmadu / Whisker / Enwe na-asacha / Gradient / Ripped / na-eyi akwa okike 3D
Nkà na ụzụ nke ụlọ ọrụ akwa denim - denim laser osise, nke a aburula teknụzụ kachasị na Europe.
Denim laser saa usoro bụ dijitalụ na akpaka nhazi mode. Ọ nwere ike ọ bụghị naanị ịghọta ahịhịa aka, ajị anụ, ịsa ahị enwe, dọwara n'usoro mmepụta ọdịnala, kamakwa iji laser etch ahịrị, okooko osisi, ihu, leta na ọnụ ọgụgụ, na-egosi mmetụta okike. Ọ nwere ike ọ bụghị naanị ịghọta usoro nhazi nke ịsacha usoro, mana ọ ga-ezutekwa ahịa ahịa nke ahaziri obere ogbe ahaziri iche.
Denim Laser Saa
Ogbe Aka Aka
Otu igwe dochiri ndị ọrụ ise. Igwe ahụ na akpaghị aka ma rụọ ọrụ nke ọma.
Mgbu usoro ahụ
A dịgasị iche iche nke mgbagwoju Filiks, dị ka wiska, 3D wiska, enwe asacha, grajentị, dọwara, na ihe ọ bụla e kere eke, dị nnọọ a laser mfe inweta.
Mee ngwa ngwa maka mmepe ngwaahịa ọhụụ, a na-achịkwa usoro a n'oge.
Omenala akwụkwọ ntuziaka na-arụ ọrụ, àgwà siri ike ịchịkwa. The laser osise okokụre ngwaahịa nwere a ukwuu na-agbanwe agbanwe mmetụta, ezi na mụ mma.
Ọnụ ụgwọ dị ala
Teknụzụ Europe, nke kwụsiri ike ma nwee ntụkwasị obi, ụgwọ mmezi pere mpe, naanị mkpa 7 kWh kwa elekere.
Golden Laser - Laser ịcha osise usoro bụ nhọrọ kachasị mma iji nwekwuo uru nke ngwaahịa denim akwa.
Nchekwa ike na gburugburu ebe obibi
Usoro ọdịnala na-eri nnukwu ihe ọgwụ kemịkal, ọtụtụ ịsa ahụ na-ebute nsị mmiri, nsị mmiri a na-ekpofu na-emerụ gburugburu ebe obibi. Laser saa mechara mmetụta dị iche iche nke jeans n'ụzọ kachasị dị mfe, na-eme ka gburugburu ọrụ na-arụ ọrụ, nchekwa nchekwa na nchekwa gburugburu ebe obibi.
Laser saa na-agwakọta na ụfọdụ omenala usoro ike a pụrụ iche elu-ọgwụgwụ boutique denim.
Laser osise osise usoro bụghị naanị na-eduga ndị denim nhazi ụlọ ọrụ, kamakwa, ọ karịrị akarị na ngwa dị ka akpụkpọ anụ, jaketị, T-Chiefs, na corduroy uwe, na nwere a sara mbara applicability dị iche iche akwa na n'uwe ihe. Mmetụta ihe osise 2D / 3D na-eme ka oghere ngwaahịa dị elu dịkwuo elu.
Laser Washingsa osise System
NKE A ASHS ENR DE ENLỌ LLỌ ỌS LR L ASB LR L LB THISR L LB LR FOR FORB L
Nodị No.: ZJ (3D) -9090LD / ZJ (3D) -125125LD
Denim laser ịsa na osise usoro, ya na-arụ ọrụ ụkpụrụ bụ iji kọmputa chepụta, okirikiri nhọrọ ukwuu, na-eme ka PLT ma ọ bụ BMP faịlụ, na mgbe na-eji CO2 laser osise igwe na-eme ka laser doo elu okpomọkụ etching n'elu nke n'uwe akwa dị ka kọmputa ntuziaka . A na-ewepu yarn ahụ e mere ka ọ na-ekpo ọkụ dị elu, na-agba agba, ma dị omimi dị omimi nke etching ka ọ mepụta ụkpụrụ ma ọ bụ nsonaazụ ndị ọzọ. A pụkwara iji ihe ịchọ mma chọọ akwa mma a na-achọ mma, mmachi, igwe nhicha, yana ngwa igwe iji kwalite ọrụ nka.
More banyere ngwaahịa a
Professional software, mfe iji rụọ ọrụ, mfe iji tọghata ndịna n'oge ọ bụla.